Usoro BIM 4D - iji Navisworks - Geofumadas
Anyị na -anabata gị na gburugburu Naviworks, ngwa ọrụ ọrụ Autodesk, ahaziri maka njikwa ọrụ owuwu.
Mgbe anyị na -ahazi ọrụ iwu ihe owuwu na ịkụ ihe, anyị ga -edezi ma nyochaa ọtụtụ ụdị faịlụ, hụ na ọzụzụ dị iche iche na -arụkọ ọrụ, ma jikọta data iji mee ngosi dị ike. Site na Autodesk Navisworks ị nwere ike ime nke a na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga -amụta otu esi eme nyocha nyocha nke faịlụ sitere na Revit, Autocad, Civil 3D, Plant3D na ọtụtụ ngwanrọ ndị ọzọ, niile n'ime Naviworks. Anyị ga -akụziri gị ka ị gaa njem nlegharị anya nke ụdị ahụ wee mepụta simulation ihe owuwu. Ị ga-amụta ka ị ga-esi enyocha ndabichi ịdọ aka na ntị wee mepụta onyonyo fotorealistic nke ụdị jikọtara ọnụ.
Na -arụkọ ọrụ ọnụ na ndị otu BIM
Nweta ngwaọrụ maka nyocha na ndezi faịlụ BIM nwere ọtụtụ ọzụzụ
Tinye njegharị mebere mmekọrịta na ihe ngosi gị
Mee gburugburu site na mmemme dị iche iche
Mepụta ịme anwansị oge na 4D
Gbaa ule nnyonye anya n'etiti ụdị ọzụzụ ọtụtụ
Ọ dịghị mkpa inwe ihe ọmụma ọ bụla na mbụ
Kedu onye nkuzi a maka:
Ndị ọkachamara metụtara imewe na ịrụ ọrụ
Gaa na nkuzi Navisworks
Previous Post«Previous Inventor Nastran Agụmakwụkwọ
Next Post Lomalọma - BIM MEP ExpertNext »